Alahady 29 Desambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY FARAN’NY TAONA – FAMARANANA NY FANKALAZANA NY FAHA-40 TAONAN’NY VONDRONA FOTOTRA LAIKA.
“Iaino ny fiadanan’ny Tompo”
« Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao;Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. » (Nomery 6:24-26)
Fotoana miavaka ny androny satria sady famaranana ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny VFL no alahady faran’ny taona. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fanompoam-pivavahana, natao tamin’ny endriky ny litorjia voalohany, ary nanamafy izy fa mbola ao anatin’ny fitaizam-panahy hoe “Iaino ny fiadanan’ny Tompo” isika, sady mamarana ny taona. Ny nitoriteny dia ny Mpitandrina Robert Saonina Narison Mpanampin’ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana ao amin’ny Foibe. Ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola Lanto sy Mikael Randrianonimandimby no nivavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra Masina.
Ny Salamo 121 no niarahan’ny mpianakavin’ny finoana namaky teo am-panombohana ny fotoana ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra:
«Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely.Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin’ny an-kavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina. Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy. Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin’izao ka ho mandrakizay. » (Salamo 121)
Noredonina avy eo ny hira fanevan’ny faha- 200 taonan’ny Sekoly.
VAVAKA FIDERANA SY FISAORANA
Hoy ny Mpitandrina tao anatin’izany vavaka izany : fomba mahagaga ny hanehoanao ny fitiavanao ary mankalaza izahay satria nomenao tombon’andro amin’izao alahady faran’ny taona izao. Alahadin’ny fiantsoana araka ny fandaharan’ny FJKM izao ho an’ireo manana andraikitra hanampy ny mpitandrina eny anivon’ny Fiangonana. Mahatsiaro ny famindram-ponao izahay ary mampijoro vavolombelona anay izany. Isaoranay avokoa ny ataonao anay satria miara miasa avokoa ireny. Maniry ny fanatrehanao anay izahay ka ny atao dia ho sitrakao.
Ny sitrapon’Andriamanitra natolotra ny Fiangonana izao anio izao dia nalaina tao amin’ny Lioka 1:76,79 « Ary ianao, ry zaza, dia hatao hoe mpaminanin’ny Avo Indrindra; Fa hialoha eo anatrehan’ny Tompo ianao hamboatra ny lalany. Hamirapiratra amin’izay mipetraka ao amin’ny maizina sy ao amin’ny aloky ny fahafatesana, Hanitsy ny diantsika ho amin’ny lalam-piadanana. »
Hoy ny Mpitarika : vao avy nandre ny Teniny sy ny sitrapony isika ka mahatsiaro fa tsy tanteraka , mifona Aminao, mangataka ny famindram-ponao amin’izay tsy mifanaraka amin’ny sitraponao. Miharihary ny tsy fahamarinanay. Mitalao izahay, aza isaina ny tsy fahamendrehanay. Mamindra fo ary raiso ny vavakay amin’ny anaran’I Jesoa Kristy.
Nohiraina ny hira ao amin’ny fihirana fanampiny faha- 27 : 3 avy eo.
Ny Tompo Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana, koa handeha handray ny famelan-keloka. Natolora ny teny ao amin’ny Ohabolana 23:11 « Fa mahery ny Mpanavotra azy, Izy no hisolo vava azy amin’ny adiny aminao. » sy Salamo 103:3« Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra, »
Noredonina ny hira Ffpm 67 : 4 ary notononina avy eo ny fanekem-pinoana laharana voalohany dia nisy ny feon-javamaneno.
Ny Zoky Ramanandraibe Ravosson Haingo K7 no nanatnteraka izany. Niaraka novakiana ny Jaona 14:27a » Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo » Inona no atao hoe « Fiadanana » ? Raha valiana tsotra dia hoe : »Faly, sambatra, voavonjy »
Raha izany ary, manana fiadanana ve ianao ? avy aiza ary inona avy izany ? Ny fahasalamana manome fiadanana, ny fahombiazana, ny fananana, ny fihavanana sy fankatiavana, ny fitomboana amin’ny finoana, ny fahazoana tombon’andro, ny fisian’ny Tompo, ny fahafahana omen’ny Tompo. Nasain’ny tompon’anjara nitsangana ireo izay efa nahazo tamin’ireo fiadanana ireo tamin’ity taona ity. Efa nomen’ny Tompo ny fiadanany ianao. Nomeny izany dia efa lasanao. Nomeny tamin’ny rà soany. Tadiavo ary tazomy sy fikiro izany fiadanana izany. Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo
Nanao vavaka teo am-pamaranana izy.
Ny Sekreteram-piangonana Razafimaharo Mamy no nanolotra izany.
Avy amin’ny Foibe : ny Alahady 19 janoary 2020 no hitodrana am-bavaka ny Filohan’ny Fjkm mianakavy sy ny taom-piasana 2020
Ny fanompoam-pivavahana amin’ny Alarobia 1 Janoary dia nanomboka amin’ny 8 ora sy sasany.
Ny Alahady 05 Janoary 2020 dia hiarahabana ny zokiolona sy ny raiamandreny Mpitandrina
Raha nanao fanentanana ny Mpitandrina dia nampahatsiahy ny fotoana famaranana ny taona ny 31 desambra miaraka amin’ny AFF manomboka amin’ny 2 ora hatramin’ny 5 ora sy ny fanompoam-pivavahana amin’ny 1 Janoary. Nanolotra ny Mpitandrina hitory ny Tenin’Andriamanitra izy dia ny mpanampin’ ny Tonian ’ny Departemantan’ny Fjkm Robert Saonina Narison izay mitondra Fiangonana be dia be satria manerana ny Fjkm ary niarahaba sy nirary soa azy. Nanao ny fiarahabana sy fitondrana am-bavaka ireo tanora nanoriny ny fanambadiany teo ambonin’ny vatolampin’ny Fiangonana izy :
– Rakotondramanana Naly Emilio sy Randrianaivo Joro Mbolatiana
– Andrianasolo Hervé Eric sy Namelanatoandro Fetrarinosy Aurelia
– Rafararison Onihariliva Fiononana sy Rafalimihaja Herin’ny Aina Moadia.
Razafindrabe John Bam, mpanolon-tsainan’ny Biraom-piangonana no nanonona ireo raki-boady sy ny raki-pisaorana . Ny hira nangatahin’ireo nanolotra izany dia ny FF 1/1, Ffpm 482/4, FF 3/1, HF 43/1, Misaotra Anao izahay, FFpm 778/2. Ny hira fanolorana ny rakitra dia ny hira Ffpm 45/4.
Mialoha ny vavaka sy vakiteny dia ny FF 47 no natao. Ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola Lanto sy Mikael Randrianonimandimby no nivavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra Masina. Ny Perikopa androany dia Nomery 6:22-27, Jaona 14:27-31 ary Filipiana 4 :6-9. Ny Hira Ffpm 213 /1,3 no natao avy eo.
Nivavaka ny Mpitandrina Robert Saonina Narison teo am-panombohana, nisaotra ny Tompo noho ny mbola hafahana mijoro vavolombelona sy ny nankalazana ny faha 40 taonan’ny Vondrona Fototra Laika eto Amparibe Famonjena, ary nangataka ny asan’ny Fanahy Masina. Avy eo dia niarahaba noho ny nahatratrarana ny noely 2019 ary mirary ny hahatratra ny taona 2020 ka homban’ny Tompo anie. Rehefa vita izay dia nanao fahafampatarana ny momba azy ny Mpitandrina.
Mpitandrina nivaoka tamin’ny 2002 izy. Tany Sahamalaza-Ambalavao Tsienimparihy no nanendrena azy voalohany, dia tany Maromamy Brickaville avy eo. Tamin’ny 2O17 izy voatendry ho mpanampy ny tonian’ny departemantan’ny Fiangonana ao amin’ny departemanta telo izay misy eo amin’ny FJKM. Izany mpanampy izany dia mpiara miasa, mpiasa iombonana miainga amin’ny famaritana ny SME, mijoro ho vavolombelona amin’izay hampandeha ny asan’ny Fiangonana. Nitantara izy hoe nisy mpanompon’Andriamanitra niantso tany an-tranony. Nanome akanjo ho azy efa-mianakavy. Ny tena nampihetsi-po tonga teto Antananarivo izy tamin’ny 2017, tsy nanana « robe pastorale » fa may. Nomen’ilay mpanompon’Andriamanitra « robe pastorale ». Tena nivaly ny vavaka fa nahazo fitaovana nentina niasa.
Ny andraikitra tànany : misahana sy manatanteraka ny « communication » sy ny « administration » eo anivon’ny departemantan’ny Fiangonana. Misahana ny synodamparitany 38 sy ireo Fiangonana maro be ; ireo mpitandrina miisa 1500, ireo misionera miisa 2600, Sampana sy Sampan’asa velona eo anivon’ny FJKM… Mila fitaovana daholo (fiches) ny fanatanterahana ny asa (ordinateur). Ilaina koa « moto » amin’ny fivezivezena. Ankoatr’izany, miandraikitra ny fanompoam-pivavhana rehetra, tonga aloha amin’ny fotoana rehetra. Ohatra momba ny fotoana hatao eny Antsonjombe amin’ny 19 janoary, efa tamin’ny 20 desambra no nanomboka nikarakara. Mangataka fitondrana am-bavaka.
« IAINO NY FIADANAN’NY TOMPO » Alahady fiantsoana ny alahady anio, hoy ny mpitoriteny, ary alahady famaranana ny fankalazana ny faha 40 taonan’ny Vondrona Fototra Laika eto Amparibe Famonjena. Ary koa, alahady farany amin’ny taona 2019 hijerena ny lasa sy hibanjinana ny ho avy. Ny Nomery 6:22-27 no nangalana ny hafatra izay ahitana ny toromarika nomen’Andriamanitra ny zanak’Israely mba hitoeran’izany taraka izany amin’ny finoana an’Andriamanitra. Andriamanitra maneho ny fiombonan’aina amin’ny zanak’Israely ; Andriamanitra mitoetra amin’ny olona, manome fitahiana.
Ny fiadanana dia fihavavan’Andriamanitra amin’ny olona, fanasitranana. Ny fanontaniana mipetraka dia « Ahoana no hisehon’izany asan’Andriamanitra izany amin’ny olom-boafidy ? Famaranana ny fankalazana ny faha 40 taonan’ny Vondrona Fototra Laika eto Amparibe Famonjena izao. Ny kristiana rehetra no antsoina hoe laika ary ny mpino no antsoin’Andriamanitra. Ny mpino miaiana ny antson’Adriamanitra dia:
Nomery 6:24 « Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao. « Andriamanitra mihitsy no mikarakara amin’ny zavatra rehetra izay manahirana, ilaina amin’ny fiainana. Ny mpino antsoina dia nantsoina hiara hiasa amin’ny mpanompon’Andriamanitra. Ny fiadanana dia maneho ny fiarovan’Andriaùanitra. Ny fiadanana no hiaro ny fonareo, ny hevitrareo ao amin’i Jesoa Kristy. Jesoa Kristy irery no hahazoana fiadanana.
Nanao Fijoroana vavolombelona ny Mpitandrina : narary Ramatoa, nisy traitement natao; narary koa ilay zaza faharoa, ny tena anefa nirahan’ny FJKM. Rehefa tonga tany an-tanana dia namono telefoana. Sahirana Ramatoa nefa tsy nahazo ahy mihitsy. Nony namelona telefaonina aho dia nisy « message ». Niantso aho nefa ratsy dia ratsy ny fifandraisana. Vao nifampiresaka kely dia tapaka. Ny tiany ambara dia hoe izay miaina ny antson’Andriamanitra dia arovan’Andriamanitra, omen’Andriamanitra fitahiana. Nahazo fanasitranana. Akaiky antsika Andriamanitra, koa aza manana fanahiana
2°) Mahazo famindrampo
Nomery 6:25 « Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao; ». Jesoa Kristy dia mijery antsika, nanolotra ny tenany teo amin’ny hazo fijaliana Izy mba hananantsika fiainana mandrakizay. Koa mila mibebaka isika, mitodika amin’ny lasa, mandini-tena ka hamaly ny antson’Andriamnitra ka hitenenana hoe « efa lasa ny zavatra taloha … », « ary amin’zao sisa izao aza manota intsony »
3) Omeny fiadanana
Nomery 6:26 « Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. » Ny Tompo mihitsy no mitoetra eo amin’ny fiainana, iJesoa Kristy mihitsy no ao anatinao ka mahatonga anao hanolo-tena hanatanteraka ny asan’Andriamanitra. Ny kristiana hamirapiratra eo anatrehan’Andriamanitra noho ny fanaovany ny asan’Andriamnitra.
Ny ataontsika dia manao izay tsara eo anatrehana’Andriamanitra. Mahay mifamela heloka, mahatsiaro ho olo-nantsoina sy voavela heloka. Tsy olona eo amin’ny vava no milaza fa miaiana ny fiadanan’i Jesoa Kristy nefa ny fony tsy ao. Aoka ho tena vahoakan’Andriamnitra marina isika ka hanao ny asan’Andriamanitra amin’ny fo.
Ny mpino miaiana ny antson’Andriamanitra no arovany sy mahazo famindrampo ary omeny fiadanana
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amena
Hoy ny Mpitandrina tao anatin’izany : Isaoranay Ianao fa Andriamanitra tia anay , mitondra anay amin’ny Teny sy ny hafatra hiaina ny fiadananao. Mitondra am-bavaka ny Fiangonana sy mpitory Filazantsara rehetra mbola hiaina ny antsonao. Mivavaka ho an’ny kristiana rehetra na eto an-toerana na any am-pita, ho an’ny fiomanana ny famaranana ity taona ity, na ny miaraka amin’ny AFF na ny any amin’ny fianakavian tsirairay, mba hiomanany ka ho vonona hatrany hiaina ny fiadanana sy ny antsonao. Nivavaka ho an’ny mpitandrina nitory ny Teny sy ny fiankavaiany. Na dia tao aza ny fahasahiranany, Ianao manana ny hevitra hiheverana azy, Ianao no miaro azy ary manome fiadanana ka afaka mitory ny Filantsaranao izao alahady izao izy. Nivavaka ho an’ny Vondrona Fototra Laika noho ny faha-40 taona niasany, niitondra am-bavaka ireo sahirana, ireo voan’ny tsy fidiny, ny voan’ny tsindry hazo lena. Nivavaka ho an’ireo nanao raki-pisaorana sy raki-boady ary nangata-pitahiana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Batisa : Natao mialoha ny hira 813. Ny nandray ny Sakramentan’ny batisa dia ny zaza:
RAZAFINDRABE Bam Ny Avo Tia
Zanak’Atoa RAZAFINDRABE Bam Herizo sy Rtoa RAZANAJATOVO Tahianaharilala
RAZAFIMANANTSOA Mahandry Jayden
Zanak’Atoa RAZAFIMANANTSOA Andry Marcel sy Rtoa RABARISON Claudia Mihamina
Nentin’ny Mpitandrina am-bavaka izy ireo avy eo .
Famaranana ny taom-pankalazana ny faha-40 taonan’ny Vondrona Fototra Laika.
Ny Diakona Ramiadamanana Josiane no nandray fitenenana ka nanolotra, tamin’ny anaran’ny biraon’ny VFL, ny Tonian’ny Sampana Fototra Laika Rajaonah Dina izay nanatrika ny fotoana. Nanolotra ny certificats sy nampisalorina zioga ireo mpikambana vaovao ao amin’ny VFL. Natao ny hira 307 mialoha izany ary ny Mpitandrina Raharijaona no nitondra azy am-bavaka sy nitsodrano azy avy eo. Nanao ny hira faneva ny mpikambana ao amin’ny VFL avy eo. Ny filohan’ny VFL Rajaonarison Rivo no nandray fitenena taorian’izay nanambara ny hampidinana ny banderole any ivelany. Nasaina nitsangana ny mpikambana rehetra ao amin’ny VFL ary ny Mpitandrina Raharijaona no nanambarana ny famaranana ny fankalazana, ny asa nefa mitohy hatrany.
Nitohy tamin’ny famakianan’ny mpitantsoratry ny Fiangonana Razafimaharo Mamy ny anaran’ireo nodimandry nandritra ny taona 2019. 22 no isan’izy ireo.
Natao ny hira Ffpm 79 dia natolotra ny tsodrano ary niarahana nanonona ny tondrozotra. Ny hira ao amin’ny Fihirana Fanampiny 11 no namaranana ny fotoana. Nirava tamin’ny 11 ora 43 ny fanompoam-pivavana. Nitohy tamin’ny fivorian’ny Ankatoky ny fandraisana avy eo. Nirava tamin’ny 12ora 40 ny fotoana .
Irimanana Eninkaja no nitendry ny orga niaraka tamin-dRakonarivo Hery, Rabiazamaholy Hery Lanto no nikirakira ny fanamafisam-peo ary Ranaivoson Joël no niandraikitra ny fàfana.
Rakotondramboa Andry no naka ny sary ary Rajaofetra Voahangy sy Rajaofetra Seta no nandray an-tsoratra.